दिल्लीलाई चुनौती दिदै जब काठमाडाैंले उठायो यस्तो कडा कदम, तब हल्लियो भारत, के भने मोदीले ? — Imandarmedia.com
दिल्लीलाई चुनौती दिदै जब काठमाडाैंले उठायो यस्तो कडा कदम, तब हल्लियो भारत, के भने मोदीले ?
यसैबीच, वैशाख २६ मा भारतले विवादित कालापानी क्षेत्र भएर निर्माण गरिएको पिथौरा–लिपुलेक सडक खण्ड उद्घाटन गरेपछि नेपालीमा भारतप्रतिको अविश्वास थप बढ्यो । त्यसप्रति सरकार र जनस्तरबाट तीव्र विरोध भयो । नेपाल सरकारले फेरि एकपटक वार्ताका लागि आग्रह गर्‍यो । दिल्ली भने अझै पनि काठमाडौंका घटना क्रमलाई खासै गम्भीरतापूर्वक लिने मुडमा थिएन । नेपालको औपचारिक विरोधपछि भारतले दिएको पहिलो प्रतिक्रियाबाट पनि त्यो पुष्टि हुन्छ ।
त्यसमा कोभिड १९ को महामारीपछि बस्ने भन्दै वार्तालाई खासै प्राथमिकता दिइएको थिएन । तर जेठ २ मा भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले चीनतर्फ संकेत गर्दै सीमासम्बन्धमा यसअघि कुनै विवाद नरहेकामा नेपालले ‘अरू कसैको इसारामा’ विरोध गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि परिस्थितिले अर्कै मोड लियो र नेपाल सरकारमाथि नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न दबाब पर्‍यो ।
यी परिघटना दिल्लीका लागि अनुमानबाहिरका थिए । तर, दिल्लीले गर्न सक्ने केही थिएन । संशोधन प्रक्रिया रोक्न सोझै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसमाथि नेपाल मामिलाका जानकारहरुले त्यहाँको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा परिस्थिति थप बिग्रन सक्ने भन्दै दिल्लीलाई त्यसतर्फ नसोच्न सुझाव दिइरहेका थिए । भारतको राजनीतिक नेतृत्व पनि विगतको तीतो अनुभवबाट खुलेर हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्नेमै थियो । त्यसमाथि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा काठमाडौं पुगेको धेरै महिना भएकै थिएन ।
उनले काठमाडौंको राजनीतिक मौसमलाई बुझ्न बाँकी नै थियो । त्यसैले दिल्लीका सामु काठमाडौंका घटना क्रमलाई प्रभाव पार्ने धेरै विकल्प थिएन । त्यसमाथि कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण र चीनसँगको विवाद दिल्लीका लागि थप टाउको दुखाइ बनिरहेको थियो । जसले गर्दा दिल्लीका सामु नयाँ नक्सा जारीदेखि त्यसलाई समेट्नका लागि संविधान संशोधनसम्मका घटनाक्रम टुलुटुलु हेर्नुको विकल्प थिएन । भारतले नचाहँदा नचाहँदै नेपालका दुवै संसद्बाट नयाँ नक्साअनुसार संशोधन प्रक्रिया टुंगिएको छ ।